झापाली लोकनायक « Loktantrapost
२७ आश्विन २०७३, बिहीबार १५:३९
लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिमा अघि बढ्न प्रयासरत छ । मुलुकको परिवर्तन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नु पर्ने दायित्व पनि हामीमाथि छ, अहिलेको सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने युवा पुस्ताको काँधमा छ । झापाले मुलुकका सबैखाले परिवर्तन र सुधारका आन्दोलनमा सशक्त सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
प्रभातकालमा घामको पहिलो प्रकाशको स्पर्शसँगै ब्यूँझिने झापा मुलुकको मझेरीमा अनुपन आभा खिँचिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको सोचलाई मुर्त रुप दिने कार्यको अगुवाई पनि झापालीहरूबाटै भइरहेको छ । चाहे त्यो मुलुकको नेतृत्व गरेर होस् वा भुकम्पबाट थिलथिलो भएको मध्य र पश्चिमका दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई छानो ओडाउने कार्यमार्फत होस् । आन्तरिक उडानमा पहिलो पटक जेट विमान भित्र्याउनेदेखि गिनिज बुकमा नाम लेखाउनेसम्मको ख्याति झापालीलाई प्राप्त छ ।
यही परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले यसपालीको दसैँ तिहार विशेषाङ्कमा झापाली गौरवगाथा लेख्ने व्यक्तित्वलाई लोकनायक चुनेको छ । झापामा लोकनायकका हकदार धेरै छन् । सबैको आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान छ । लोकतन्त्र पोस्टको सम्पादक मण्डलले झापाका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व र सर्वसाधारणसँग सर्वेक्षण गर्यो–को होलान् त झापालाई चिनाउने नायकहरू भनेर । सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पृथक काम गरी सफल भएका दश जना व्यक्तित्वलाई हामीले ‘झापाली लोकनायक’ छनोट गरेका छौँ ।
चयन प्रक्रिया कसैको आग्रह–पूर्वाग्रहमा गरिएको होइन । सम्पादन मण्डलको पूर्ण स्वतन्त्रताका आधारमा लोकनायक चयन गरिएको हो । यद्यपि हामीले चुनेका लोकनायकका विषयमा आउने कुनै पनि टिप्पणीको हामी हार्दिक स्वागत गर्ने छौँ । आगामी वर्ष पनि वर्ष नायकका रुपमा उत्कृष्ट झापाली चुन्ने हाम्रो सिलसिला जारी नै रहने छ ।
२७ सेप्टेम्वर २०१५ को दिन लन्डनको ‘गिनिज वल्र्ड रेकर्डस्’ले एउटा प्रमाणपत्र जारी गर्दै बतायो–‘अर्पण शर्मा संसारकै सबैभन्दा तेज स्मरण शक्ति भएको व्यक्ति भएका छन् ।’ यो खबर २७ वर्षीय अर्पणका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीकै लागि गर्वलायक थियो । किनकि, वौद्धिक क्षमताका आधारमा एउटा नेपाली युवाले ७.५ अर्ब पृथ्वीवासी माझ सर्वाधिक तेजस्वी प्रमाणित हुनु मामुली कीर्तिमान होइन ।
विश्व कीर्तिमानी अर्पण भद्रपुर–८ निवासी मोहन प्रसाद कट्टेल र खिना शर्मा कट्टेलका सन्तान हुन् । उनले ‘लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट्स मेमोराइज्ड इन वान मिनट’ विधामा ४२ वटा वस्तु स्मरण गरेर विश्व कीर्तिमान हासिल गरेका हुन् । त्यस अघि ४० वटा वस्तु स्मरण गरेका भारतका जयसिंह रविरालाको नाममा त्यो रेकर्ड थियो । तर यतिबेला अर्पणले ६० वटा वस्तु सजिलै स्मरण गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् ।
गायनमा रुचि राख्ने उनी साकाहारी हुन् । चिया र सुपारी समेत नखाने उनी ध्यान र अभ्यासले हरेक व्यक्तिले आफ्नो मेमोरी पावर बढाउन सक्ने बताउँछन् । मेची वहुमुखी क्याम्पसमा कमर्समा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका उनको भविष्यमा व्यावसायिक रुपमै मेमोरी सेमिनार गराउने योजना छ । नेपाल सरकारको ‘राष्ट्रिय युवा पुरस्कार–२०७२’ बाट सम्मानित अर्पणको यो सफलता हरेक युवाका लागि प्रेरणाको मुहान भएको छ ।
तस्वीर ः विजय बराल
महाकवि देवकोटाले लक्ष्य बारेमा प्रेरक सुझाव राखेका छन्–‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक ।’ हङकङमा जन्मिएर झापाको बुट्टावारीमा हुर्किएकी जीना लिङ्देनको सानैदेखिको रहर थियो–हवाइजहाज उडाउने । उनले गोरखापत्रमा क्याप्टेन सोनी राणाको विषयमा लेखिएको एउटा लेख पढेर मनमा पाइलट बन्ने सपनाको बिजारोपण भएको बताउने गरेकी छन् । भद्रपुर एयरपोर्टबाट उडान भर्दा र कहिलेकाहिँ अवतरण गर्ने सिलसिलामा जहाजले फन्को लगाउँदा जीनाको घर र स्कुलमाथि पनि आकासमा जहाज हुइँकिन्थ्यो । त्यसबेला उनी उडिरहेको जहाज एकोहोरिएर हेर्थिन् र सोच्थिन्–कसरी उडाउँछन् होला यी आकासे चराहरू ।
ब्रिटीश गोर्खा सैनिकमा कार्यरत वावु रामकुमार लिङ्देन र आमा सुमित्रा कन्दङ्वाले जीनाको वालापनदेखि हुर्किएको सपना फक्राउन सहयोग पुर्याए । बुट्टावारीको सरस्वती प्रावि, विर्तामोडको देवी प्रावि र कन्काई बोर्डिङमा अध्ययन गरेकी उनले अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट पाइलट कोर्स गरिन् र सन् २००१ देखि व्यावसायिक उडान सुरु गरिन् ।
सुरुमा साङ्ग्रिला एयरको ट्वीनअटर उडाएकी जीनाले त्यसपछि सधैँ यति एयर नै सम्हालिन् । भद्रपुर–काठमाडौँ दिनमा ३ पटक ओहोरदोहोर गरेको अनुभव छ उनीसँग । लुक्ला, जोमसोम, हुम्ला, बाजुरा जस्ता मुलुकका अप्ठेरा स्थानमा पनि उनले सफलतापूर्वक उडान भरिन् भने त्यसरी नै अवतरण पनि । हवाई जहाजकै क्पाप्टेन राजेश श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी उनले नानीहरू हुर्काउन केही वर्षदेखि जिम्मेवारीबाट विदा लिएकी छन् ।
वि.सं.२०७३ सालको वुद्ध पूर्णिमाको दिन, बैशाख ८ गते शनिवार विहान सूर्यको किरण धरतीमा खस्न बाँकी नै थियो । विश्वभरिका गुम्बाहरूमा शान्ति र अहिंसाको प्रार्थना गुञ्जिरहेको थियो । ठिक त्यसै क्षणमा भद्रपुर–१२ का २३ वर्षीय अनिस लुइँटेल सगरमाथाको चुचुरोमा उक्लिए । अदम्य साहसका प्रतिमूर्ति उनी विश्वको शिखरमा औपचारिक रुपमा पुग्ने पहिलो झापाली हुन् ।
सानैदेखि साहसिक काममा रुचि बढाएका उनले सगरमाथा आरोहणको सपना धेरै पहिलेदेखि सजाएका रहेछन् । हिमाल चढ्ने उनको इच्छालाई सुरुमा कसैले पत्याएनन् । सन् २०१४ अप्रिल २५ मा उनले ६ हजार मिटरभन्दा अग्लो आइल्यान्ड पिकको सुटुक्कै आरोहण गरेपछि मात्र उनलाई पत्याइयो । वुवा शिवराम लुइँटेल र आमा कमला लुइँटेलको जेठो सन्तान उनले सगरमाथा चढ्ने खर्च जुटाउन वुवाका साथी भगिरथ नेपालको समेत घरबारी बन्धक राखेर ऋण काढ्नु पर्यो, सहयोग समिति गठन गरेर आम जनसमुदायसँग चन्दा बटुल्नु पर्यो ।
दुःख र सास्तीसँग पटक्कै नहच्किने स्काउटका विद्यार्थी अनिस युवा पुस्तामा आश जगाउने प्रेरक व्यक्तित्व हुन् । उनले नेपालको गणतान्त्रिक संविधान र केचनाको माटो सगरमाथामा पुर्याएका छन् । सगरमाथा आरोहण गर्ने नेपालको पहिलो स्काउट उनलाई संस्थाको झण्डा शिखरमा पुर्याएकोमा बेलायतको ‘द ड्युक अफ इडनबराग’ले स्वर्ण पदक समेत प्रदान गरिसकेको छ ।
तस्वीर ः गगन राजभण्डारी
झापा जिल्लालाई धान बालीको राजधानी मानिन्छ । कुनै बेला २८ वटा ठूला राइस मिल थिए यहाँ । भद्रपुरको धान चामल कम्पनीले भारत, भूटान र बङ्गलादेशसम्म नेपालको चामल निर्यात गथ्र्यो । अहिले ठूला राइस मिल नगण्य छन् । तर विर्तामोडका जगदीश मिण्डा चामल उद्योगमा पाँच दशकदेखि अविराम सक्रिय छन् । धाइजन–१ मा सञ्चालित उनको सूर्य एग्रोले झापाको पुरानो पहिचान कायम गरिरहेकै छ ।
उद्यमी जगदीश वि.सं. २०२२ मा दार्जीलिङको स्कुले शिक्षा सकेर भद्रपुर फर्केपछि मेची बहुमुखी क्याम्पसको पहिलो विद्यार्थीको रुपमा भर्ना भए । पढाइ र व्यापार दुबैलाई एकसाथ अघि बढाएका उनले शिवगञ्जमा टुकटुके राइस मिल खोले । मनग्य नाफा हुन थालेपछि उनलाई विदेशमा फुड टेक्नोलोजी पढेर फर्केका छोराहरू रमेश, राजेश र सञ्जयले व्यवसायमा सघाए । वि.सं.२०५२ मा धाइजनमा नेपालकै ठूलो राइस मिलको रुपमा ‘सूर्य एग्रो’ स्थापना गरे जगदीशले ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट समेत ‘गौ रक्षक’को सम्मान पाएका उनी मुनाफाको ठूलो हिस्सा गौ संरक्षण र असहायको सेवामा खर्चिन्छन् । वि.सं. २०५३ सालको एक विहान ब्रह्ममुहुर्तमा जब उनी निद्राबाट व्यूँझे–एक्कासी उनको मुखबाट ‘मख्खन’ भन्ने वाणी निस्कियो । उनले सूर्य एग्रोका चामल, दाल र गौआहारका सबै ब्रान्डको नाम ‘मख्खन’ नै राखेका छन् । धान–चामलसँग गाँसिएको झापाको पहिचान जोगाउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा हिँडाउन उनले दिएको योगदान अतुलनीय र अभिनन्दनीय छ ।
‘काम कर, फलेर आश नाकर !’–राजबंशी भाषामा ‘श्रीमद्भागवत गीता’को सार हो यो । लोकप्रिय हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ ‘गीता’का सम्पूर्ण उपदेशलाई राजबंशी भाषामा अनुवाद गरेका छन् कनकाई–९ निवासी पवन राजबंशीले । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका करीव एक करोड राजबंशी भाषीका लागि अनुपम उपहार भएको छ राजबंशीमा अनुदित ‘गीता’ ।
४७ वर्षीय उनी राजबंशी समुदायबाट नेपालका पहिलो प्राज्ञ हुन् । नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान काठमाडौँले वि.सं.२०६९ मा उनलाई प्राज्ञ मनोनयन गरेको हो । राजबंशी भाषाको पहिलो पत्रिका ‘बिचन’को संस्थापक सम्पादक उनी रेडियोबाट राजबंशी भाषामा समाचार वाचन गर्ने पनि पहिलो व्यक्ति हुन् । स्व. कुलदीप रावबंशी र आमा जलेश्वरी देवी राजबंशीको सन्तान उनको ‘अनुभूति’ नामक रङ्गीन कार्टुन चित्र सङ्ग्रह प्रकाशित छ ।
चित्रकलामा विशेष दख्खल राख्ने पवन साधा जीवन जिउँछन् । झापाका दर्जनौँ स्कुलमा चित्रकारिता पढाउँदै आएका उनले राजधानीको तत्कालीन ‘समकालीन’ लगायतका साप्ताहिक पत्रिकामा कार्टुन चित्र बनाउथे । कञ्चनजङ्गा रेडियोमा समाचार वाचन गर्न गएका बेला एकपटक पत्रकार चन्द्र भण्डारीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘मुनामदन’लाई राजबंशी भाषामा उल्था गर्न हौस्याएका रहेछन् । आखिर त्यही हौसलाबाट प्रेरित भएर पवनले गतिलै काम गर्ने सोच राखेर ‘गीता’ नै अनुवाद गरेँ । राजबंशी समुदायको ‘कला शिरोमणि’कै उचाइ नापिसकेका उनी आम नेपालीका उत्तिकै प्रिय उत्तिकै प्रेरक व्यक्तित्व हुन् ।
भनिन्छ, डरभन्दा अलिकति पर हुन्छ सफलता । चट्टानी ठाडो उकालो नचढी भीरमौरीको मह कहाँ बटुल्न सकिन्छ र ! गृह प्रशासनमा रहेर लामो निजामती सेवाको अनुभव सङ्गालेका भद्रपुरका दिपक पोखरेलले मेचीको पहिलो हवाइ उद्यमी बन्ने अद्वितीय आँट गरेका छन् । थुप्रै क्षेत्रमा मुलुककै अग्रणी झापा जिल्ला अब हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा पनि नयाँ इतिहास रच्न सफल भएको छ । आन्तरिक उडानमा फड्को मार्दै पहिलोपटक जेट विमान सञ्चालनमा ल्याउने श्रेय उनले पाएका छन् । वि.सं.२०७१ देखि सञ्चालनमा रहेको सौर्य एयरलायन्स प्रा.लि.का उनी संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
उनका पिता गुप्तराज पोखरेल र माता जानुकादेवी हुन् । सानैदेखि निडर र आँटी स्वाभावका उनी भद्रपुरमा ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलको स्थापना गरेपछि सामाजिक क्षेत्रमा थप लोकप्रिय भए । जब घरेलु उडानमा जेट विमानको प्रवेश गराए, उनी झनै चर्चित भए । हवाईजहाज किन्नमा सौर्य एयरले एक अर्ब लगानी गरेको छ । साइकल, बाइक र मोटरगाडीको समेत व्यवसाय नगरेका उनले एकैचोटी हवाई यातायातको क्षेत्रमा हात बढाउनुलाई निकै ठूलो व्यावसायिक साहस मानिएको छ ।
दिपक जति साहसी र उच्च व्यावसायिक कौशलयुक्त छन्, उनी त्यति नै सरल र सर्वप्रिय छन् । स्वास्थ्य र हवाई उड्डयन जस्तो सेवाको क्षेत्रमा अर्बौको लगानी गर्न उत्साही उनको जाँगर र उद्यमशीलता प्रशंसनीय छ ।
तस्वीर ः राजीव गौतम
मानिसले जन्मिदै सबै कुरा जानेको हुँदैन । तर, केही गुण चाहिँ पक्कै लिएर आएकै हुन्छ । यही गुणले मानिसलाई समाजमा स्थापित गराउँछ । झापा बिर्तामोडकी कोपिला बस्नेत पनि मानवीय सेवाका लागि समर्पित हुने गुण लिएर जन्मिएकी हुन् । किनभने सबै मानिसले चाहेर मात्रै यस्तो कार्य गर्न सक्दैन । घरेलु हिंसापीडित महिलालाई आश्रय र रोजगारी दिइरहेकी कोपिलालाई जर्मनीको फिमो फन्ड नामक संस्थाले १० लाख रुपैयाँसहित जर्मनीमा पुरस्कृत गरेको छ ।
१२ वर्ष अघि हिंसा पीडित महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले बिर्तामोडमा स्थापित ‘समुन्नत नेपाल’ संस्थामार्फत उनी मानवीय सेवामा निरन्तर लागिरहेकी छिन् । आयमूलक कार्यका लागि पोते र माटाका गहना पनि निर्माण गरिन् उनले । कानून र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी कोपिलालाई उनका श्रीमान विनोद बस्नेतले पनि हरहालमा साथ दिइरहेका छन् । संस्थाको दुई तले भवन छ । र, अहिले पनि २० जना महिलाले रोजगारी पाइरहेका छन् । पेशाले वकिल कोपिला बस्नेतको निरन्तरता, त्याग र समाजप्रतिको समर्पण अनुकरणीय छ । उनी भन्छिन् – ‘सेवा नै मेरो जीवनको एक मात्रै लक्ष्य हो ।’
अनादि वैदिक सनातन हिन्दु धर्मको उद्गम थलो मानिएको हिमालय पर्वतको काखमा अवस्थित नेपालको पवित्र भूमिमा ऋषिमुनिहरूले प्राचीन ग्रन्थ वेद, पुराणहरूको रचना गरे । सनातन हिन्दु मुलुक भनेर विश्वभर परिचित नेपालले केही वर्ष अघि मात्र एक जना वालसन्तलाई जगद्गुरुको रुपमा पाएको छ । राष्ट्रिय गौरव मानिएका ति जगद्गुरु हुन् झापा बुधवारे–५ का महेन्द्र भट्टराई। वाल्यकाल बुधवारेमै बिताएका उनी अध्ययनका लागि भारत गएका थिए । उनलाई हिन्दु महर्षिहरूको वृहत सभाले नेपालका प्रथम जगद्गुरु घोषित गरेको हो ।
नेपालका प्रथम जगद्गुरुको आश्रम सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र चतराधाममा रहेको छ । २०५४ सालदेखि चतराधाममा बस्न थालेका उनले सो धाम ‘प्राचीन हरिद्वार’ भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालकै एक मात्र कुम्भमेलाको आयोजना समेत गरेर उनले नेपालको धार्मिक पर्यटनप्रति विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएका छन् । जगद्गुरु वालसन्तका वुवा डिल्लीराम भट्टराई र आमा तुलसा भट्टराई बुधवारेस्थित घरमा बस्दै आएका छन् । जगद्गुरुको जन्मथलोलाई पनि तीर्थस्थलको रुपमा विकास गर्न झापामा जमर्को भइरहेको छ ।
धर्मले मानव जातिकै कल्याण गर्छ । नेपालमा बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किरात लगायतका थुप्रै धर्म र सम्प्रदाय मान्ने मानिस छन् । उनीहरूविचको सद्भाव विश्वमै नमुनायोग्य रहँदै आएको छ । अन्य धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दु धर्मका माध्यमबाट मातृभूमि नेपालको सुकीर्ति विश्वसामू फैलाउने अभिभारा अब जगद्गुरु देवाचार्यको काँधमा आएको छ ।
सन् २०१४ मा नेपालकी इन्दिरा रानाले पाकिस्तानकी मलला युसुफजई र अमेरिकाका जोन उडकै लहरमा उभिएर स्वीडेनमा जुनियर नोवेल अवार्ड अर्थात् ‘वल्र्ड चिल्ड्रेन प्राइज’ ग्रहण गरिन् । एक करोड रुपैयाँको त्यो पुरस्कार वल्र्ड चिल्ड्रेन प्राइज फाउन्डेसनले तिनै जनालाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरेको थियो ।
खासै चर्चामा नआउने उनले विश्वकै प्रख्यात पुरस्कार प्राप्त गरेपछि मात्र नेपाली मिडियाले इन्दिराको कर्मकथा खोजी गर्न थालेको हो । वि.सं.२०२७ मा झापाको तत्कालीन शनिश्चरे–६ मा सामान्य परिवारमा जन्मेकी उनले ठूली भएपछि एकैचोटी कक्षा ५ मा भर्ना भएर पढ्न थालिन् । मेलापात र चुलोचौकामै अल्मलिएकी उनलाई स्कुल जाने प्रेरणा शिक्षक हस्त परियार र उनकै दाजु जगतबहादुर रानाले दिएका थिए ।
पढाइमा कहिल्यै दोस्रो नभएकी उनी शनिश्चरे माविबाट एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौँ गइन् । त्यहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार पारिजातसँग भेट भएपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो । वि.सं.२०४७ देखि उनी जेलमा रहेका बन्दीका छोराछोरीलाई स्याहार्ने र पढाउने कर्ममा निरन्तर होमिएकी छन् । यही सिलसिलामा उनले बन्दी सहायता नेपाल (पीए नेपाल) नामक संस्था खोलिन् । झापा, इलाम, काभ्रे, काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा उनले दर्जनौँ ‘चिल्ड्रेन होम’ खोलेकी छन् । जहाँ बन्दीका सयौँ छोराछोरी र असहाय वालवालिकाले आश्रय र शिक्षादीक्षा पाइरहेका छन् । सङ्घर्ष, लगन र ममताकी पर्याय बनेकी उनी सामाजिक सेवाका लागेकाहरूका लागि उदाहरण हुन् ।
तस्वीर ः रञ्जित परियार
पाँच दशक लामो सङ्घर्षबाट राजनीतिक जीवनको शिखरमा पुगेका केपी शर्मा ओली मुलुकको इतिहासमा झापाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा झापा–७ बाट विजयी ओलीले ३८ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा वि.सं. २०७२ असोज २४ गते सपथग्रहण गरेका थिए ।
ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन् । गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पहिल्यै सम्हालिसकेका उनी २०४८ सालमा झापा–६ र २०५९ सालमा झापा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । बुबा मोहनप्रसाद र मधु ओलीका पुत्रका रूपमा ओलीको जन्म वि.सं.२००८ साल फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा भयो । २०२२ सालमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका केपी ओलीले २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिए । २०२८ सालको झापा विद्रोहका प्रमुख मध्येका एक थिए । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको सङ्घर्षमा उनी २०२८ देखि २०४४ सम्म १४ वर्ष जेल परेका थिए ।
आमा गुमाएर टुहुरो भएका उनले बाल्यकालदेखि नै विषम परिस्थितिको सामना गर्न सिके । खेत बाढीले बगाएपछि उनी किशोर अवस्थामा कम्युनिष्ट नेता रामनाथ दाहालको आश्रयमा बसेका थिए । वाम आन्दोलनका सिपाही ओली भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला राष्ट्रवादी अडान राखेका कारण अझ लोकप्रिय भए ।